नास्तिकहरू सकिने बेलामा ईश्वरको शरणमा पुग्छन्: डा. भट्टराई - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com नास्तिकहरू सकिने बेलामा ईश्वरको शरणमा पुग्छन्: डा. भट्टराई - खबर प्रवाह
काठमाडौं ।जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आखिरी दिन आएको बताएका छन् ।
उनले ओली शासनको आखिरी दिन आएको कारण पशुपतिनाथको शरणमा पुगेको बताएका हुन् ।
कतिपय नास्तिक आफ्ना आखिरी दिनमा ईश्वरको शरणमा जाने उल्लेख गर्दै डा. भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओली पशुपतिनाथमा जानु त्यसैको संकेत हुन सक्ने अनुमान गरेका हुन्।